GarsoorNews - Taariikh Nololeedka Musharax Farmaajo
Taariikh Nololeedka Musharax Farmaajo
by Farah C/laahi | Thursday, Feb 2, 2017 | 118 views
Is casilaadiisa waxee imaanee markii madaxweyne shiikh shariif axmed iyo gudoomiyaha barlamaanka shariif xassan ee ku saxiixdeen dalka Yugandha in ee awooda qeebsadaan isla markaas neh xilka laga qaado mr farmaajo.
Dalka Yugandha ayaa lagu qabtay shir looga hadlaayay Siyaasadda soomaaliya, si loo xaliyo khilaafaadka ka dhaxeeyo mas’uuliyiinta Dawladda kmg.
Taariikhda marka ee eheed 10 Juun 2011 ayaa dalka yugandha looga dhawaaqay in ee xukumada farmaajo isku casisho mudo 30 maalmood gudahood.
Waqtigaas kadib waxaa dhacay mudaaharaadyo balaaran oo looga soo horjeedo labada shariif isla markaas neh lagu taageeraayay mr farmaajo.Banaanbaxyadaas kadib mr farmaajo waxoo go’aansaday in oo xilka sii haayo ilaa inta ee barlamaanka xilka ka qaadayaan.
Laakiin wee u suurto geli weysay in oo sii joogo waxoona xilka iska dhiibay 19 juun 2011.
Farmaajo waxa uu dhashtay sanadka marka oo ahaa 1962, waxoo ku dhashtay caasimadda Muqdisho.
Waxoo ahaa nin somali mareykan ah oo ku noolaa dalka mareykanka waqti aad u dheer.Dowladii dhexe ee Maxamed Siyaad Barre waxee farmaajo mar u dooratay danjiraha safarada ee somalia ku lahaan jirtay magaalo madaxda Washington ee dalka Maraykanka, sanadka marka oo u dhaxeeyay 1985 ilaa 1988.
Raiisul wasaaraha waxoo magacaabay xukumad yar oo kooban, oo badankooda ah somalida qurbo joogta aha.
Xukumada oo soo magacaabay waxee ka koobanyihiin 18 wasiiradood, waa isbedelka ugu horeeyo ee DFKMG, waa xukumada ugu yar ee taariikhda DFKMG.
Waxaa uu xilka kadagay 16/08/2012 waxaa qabaty xilka raisal wasaare nimo dabadii cabdi wali cali gaas, famaajo waxaa lgu yaqaanaa cadalada iyo kahor marinta wax walba arimaha Dawladda waxaa uu farmaajo ku labtay Muqdisho09/08/2012 markuu kamaqanaa modo sanad ah asagaa oo musharax u ah xisbiga tayo.
Golihii Wasiirada ee Xukuumadii RW Farmaajo
Magcaha xubnaha Golaha wasiirda xukuumadda somaliya: 1- Mudane Cadullaahi Ebyan Nuur —————————-Wasiirka Garsoorka, Arrimaha Diinta & Awqaafta 2- Mudane...
Sidee ayuu Ku Noqday RW Mudane Farmaajo
Ra’iisal wasaaraha cusub ee la magacaabay waxa uu inta badan noloshiisa ku soo qaatay qurabaha, gaar ahaan dalkan Maraykanka. Ra’iisal wasaaraha cusub ee dowladda...